NOLOSHA DABACSAN EE DABACASAHA: INTEE IN LE'EG AYAY KU HABBOON TAHAY IYO MEESHA AY KA FIICAN TAHAY IN LAGU QARIYO JIILAALKA, IYO SIDOO KALE KU SAABSAN ABUURKA IYO CUNTO KARINTA "KORYAAN" - KHUDRADDA
Beeraley kasta oo waayo-aragnimo leh waxay ogtahay in beerto iyo dalagyada beeraha ay badh badh yihiin dagaalka. Hase yeeshee geedi socodka ugu adag ee adagi waa inuu ilaaliyo beergooyska. Halkan su'aasha ayaa soo baxaysa - nooca kaydinta ayaa ah mid ku haboon khudaarta gaarka ah.
Beerta bilowga ah waxay qabaan su'aalo badan oo ku saabsan sida loo abaabulo kaydinta dabacasaha. Haddii shuruudaha keydinta asaasiga ah aan la raacin, miraha ay si dhakhso ah u noqoto daboolka, caashaqay oo bilaabi kalluumeysiga.
Karootada noocee ah waxay ka fiican tahay xulashada kaydinta muddada-dheer:
Miraha waa in ay noqdaan kuwo ku filan baaluq.
Ma jiro wax calaamado ah oo kallana, waxyeello iyo cuduro.
Qodobka karootada, muddada dheer waa la keydiyaa.
Waxaa si fiican loo qalajiyey, iyada oo aan qoyaan dheeraad ah.
Kala duwanaanta saxda ah.
Miraha yaryar waxay ka fiican yihiin in laga saaro, waxay u nugul yahiin inay yareeyaan.
Caawimaad! Waxa kale oo ay ku haboon tahay in la fiiriyo beergooyska, laguma talinayo in la qodo dabacasaha cimilada roobabka qoyan, haddii kale way adkaan doontaa in la qalajiyo.
Waxaa lagama maarmaan ah in la doorto noocyada ugu habboon:
Karootada dabeysha. Darajooyinka oo daadi kara 120-140 maalmood kaddib marka ay cabasho ka soo degaan. Waxay u adkahay qabowga, u nugul yaraanta cudurrada, si ay u sii dheeraato. Marka la eego heerkulka habboon iyo heerkulka qoyaanka waxaa la keydiyaa ilaa June.
Noocyada caanka ah waa "Sweet Winter", "Queen of Autumn", "Red Giant".
Karootada xilli-ciyaareedka. Xilliga Boosku waa 100-120 maalmood. Inta lagu jiro muddadan, karootada waxay leedahay waqti si ay u nuujiso qaddarka loo baahan yahay nafaqooyinka, taas oo kordhiya nolosha shelf.
Noocyadaas waxaa ka mid ah: "Vita Long", "Nantes", "Samson".
Karootada hore. Wakhtiga Boosku waa wax aan ka badnayn 100 maalmood, inta badanna koraan isticmaalka isticmaalka xilliga xagaaga.
Waxaa jira noocyo awood u leh in lagu hayo ilaa guga. Kuwaas waxaa ka mid ah: "Alenka", "Artek", "Nandrin".
Ku saabsan noocyada noocan ah waxay ku haboon yihiin kaydinta jiilaalka oo dhan, lagu sharxay si faahfaahsan qodobkan.
Ilaa intee ayaad ku badbaadin kartaa?
Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo loo adeegsado ilaalinta karootada inta lagu jiro jiilaalka. Laakiin waxaa jira shuruudo ay tahay in loo buuxiyo midkood:
heerkulka hawada laga bilaabo 0 ° C ilaa +5 ° C (heerkulka hawada lagama maarmaanka u ah kaydinta dheer ee dabacasaha waxaa lagu sharxay faahfaahin halkan);
qoyaanka hawada qiyaas ahaan 85-95%;
ugu yaraan hawo wareegga hawada ee qolka.
Habkani waa kii ugu da'da yaraa ee ugu fududaa, laakiin luminta marka la isticmaalo waxay noqon kartaa mid halis ah. Si looga fogaado tan, waa inaad sii daryeeshaa kahor hawo-qaadidda, rinjiga, ilaalinta biyaha dhulka, madaarka waa inaysan qaboojin oo qoyin.
Dhulka, meesha khudradda la dhigo, waa lagama maarmaan in la dhigo kuraasta ama dhejinta. Waqti ka waqti waxay u qalantaa in la kala soocayo oo laga tuuro dabacasaha cayayaanka. Iyadoo la dooranayo habkan, dabacasaha waxaa lagu keydin karaa 7 illaa 9 bilood.
Soo ogow kaydinta dabiiciga ah ee Maqsin halkan.
Habkani waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan. Iyada oo kaydintaas la dhigayo, waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Qaado sanduuqyo alwaax ah oo aan lahayn godad 40-60 litir.
Nadiif iyo qalalan oo qallalan (qiyaastii 5 cm) ama balka dhirta, waa qasab ahaan (oo ay ku jiraan saliidaha lagama maarmaanka ah ee ka hortagga abuurista kallana iyo fungus) ayaa lagu shubay hoosta.
Ka dibna dusha sare ee lakabyada dabacasaha, oo lagu rusheeyaa ciid ah ama balka.
Sidan waxaad ku dhejin kartaa lakabyo badan sida muraayada sanduuqku u oggol yahay, oo daboolka si adag u dabool. In dabacasaha ciidda lagu kaydin karaa laga bilaabo 7 ilaa 9 bilood, laakiin dhadday horay ilaa hal sano ah.
Wixii habkan, waxaad u baahan doontaa inaad diyaariso hoobiye dhoobo, cufnaanta labeen dhanaan.
Ku rid badeecad kasta oo xalka ah oo ka tag si aad u qallajisid qabyo ah 1.5-2 maalmood, illaa dhoobo u noqotid qolof adag oo bixiya difaac.
Ka dib markii la raaco nidaamkan, karootada waxaa la gelin karaa dambi ama sanduuq alwaax ah. Thanks to lakabka ilaalinta ee dhoobo, karootada waxaa lagu kaydin karaa ilaa ilaa hal sano.
Dadka deggan guryaha magaalooyinka sidoo kale maaha mid adag in la ilaaliyo goosashada dabacasaha (sida loo keydiyo karootada guriga, akhriso maqaalkan). Wixii balakoon this ama loggia. Xulashada ugu habboon ee kaydinta noocan oo kale ah waa sanduuqyo isku mid ah oo leh ciid ama balka.
Haddii balakoonka ama loggia aan ku filneyn in la yareeyo, sanduuqyada la goosanayo waa in lagu daboolo buste qubo ama dhar diiran oo kale, si looga fogaado in lagu yareeyo midhaha. Kormeeridda xaaladaha oo dhan, karootiga ayaa jiifsan kara balakoonka 5 ilaa 7 bilood.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan kaydinta karootada balakoonka lagu sharxay alaabtayada.
Qaboojiyaha ku jira bacaha
Ka hor inta aadan karootada ku ridin qaboojiyaha waxaad u baahan tahay:
Karootada waa in la dhaqaa (haddii dabacasaha waa in la maydaa ka hor inta aan la kaydin waxaa lagu qeexay qodobkan).
Si fiican u qalalan.
Ku rid qaybta hoose ee qaboojiyaha ee weelka furan, Tani waa lagama maarmaan si looga fogaado uumeysiga, taas oo keeni karta duufaanta sheyga.
Ka dib markaa, u samee dabacasaha bacaha 4-5 gooya, xiro si adag ugu dheji kuna dhig qaybta si loogu keydiyo khudaarta cusub. Nasiib darro, dabacasaha laguma kaydin qaboojiyaha muddo dheer, kaliya 2-2.5 bilood.
Qodobada qarsoon ee dabacasaha dabka qaboojiyaha waxaa laga heli karaa halkan.
Balka dhadhanka ama xal dhoobo ah
Nolosha shelf ee karootada waxay ku xiran tahay habka loo doortay ee kaydinta. Waqtiga ugu badnaan waa 1 sano. Si aad uhesho natiijadan, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah siyaabaha ugu wakhti badan: isticmaalka balka boodh ama dhoobo.
Si loo gaarsiiyo khasaaraha ugu yar inta lagu jiro kaydinta dalagga, waxaa lagama maarmaan ah in la doorto karootada aan la karinin, iyada oo aan wax dhaawac ah oo farsamo ah oo keeni kara caajis. Kormeeridda sharciyadan oo idil, waxaad ku gaari kartaa badbaadada sare ee dalagga.
Sida ilaalinta beergooyska, waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo kaydiyo abuurka dabacasaha iyo waxa noloshooda shelf. Bannaanka waaya-aragnimada leh waxay aaminsan yihiin in muddada ugu badnaan loo qaadan karo 2 sano. Laakiin ugu wanaagsan ee dhan, si loo hagaajiyo biqilka, waxaa haboon in la isticmaalo abuurka sanadkii hore.
Si loo badbaadiyo abuurka, waa inaad sameysaa talaabooyinka soo socda:
Wixii kaydinta, abuurka karooto waa in si taxadar leh loo xalliyo si ka baxsan oo qudhuntay.
Ka dibna miraha waa in la nadiifiyaa si looga takhaluso bakteeriyada waxyeellada leh. Tan waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanaayo biyo kulul - buuxi abuurka biyo kulul ilaa 50 darajo, dabool dabool kuna bixi saacad.
Waxaa intaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in ay si deg deg ah u qalajin iyo si fiican, tan iyo geedi socodka ah ee beeritaanka abuurayaa dhammaadka maqnaan la'aanta dhammaystiran ee qoyaanka, iyo ku rid bacaha ama bacaha warqadda. Polyethylene for this isticmaalka ma u qalantaa, waxay xadiday socodka hawada.
Marka dhammaan hababka lagama maarmaanka ah ee hubinta kaydinta dabacasaha la dhammeeyey, waxaad bilaabi kartaa diyaarinta. Cuntooyin badan oo dhadhan fiican leh iyo mid caafimaad leh looma dhigi karo iyada oo aan la isticmaalin dabacasaha.
Mid ka mid ah cuntooyinka ugu caansan ee cunto karinta ayaa ahaa cunto fudud oo la yareeyay "Korean". Diyaarinta karootada laga soo jaray hab gaar ah:
Jajabka on grater leh caws khafiif ah) oo ah karootada cusub.
Vinegar ayaa lagu daray.
Basbaaska cas cas.
Si aad u dhadiso cusbo iyo sonkor.
Dhammaan tani waxay ku shubtay saliid gabbaldayaha kulul.
Cuntooyinka qaarkood ayaa wali isticmaala toon.
Digniin! Si aad u adkaysato noocaan fudud sida ugu yaraan hal maalin. Sababtoo ah xaqiiqda ah in halabuurka salad this kuma jiraan badeecadda hal mar la gooyo, iyo geedku weli wuxuu u dhaqmaa sida ilaalinta, nolosha shelf iyo nolosha shelf ee dabacasaha "ee Kuuriya" ee qaboojiyaha ee weel ka kooban ilaa laba toddobaad.
Si aad u doorato habka ugu haboon ee lagu keydiyo dabacasaha, waa in aad ku tiirsanaato arrimahan oo kale. Waxyaabaha loo baahan yahay kaydinta karootada:
kala duwanaanta, qoyaanka iyo heerkulka qolka meesha khudaarta loo kaydin doono;
xilliga cimiladu socoto.
Haddii dhammaan xaaladaha lagama maarmaanka ah la daboolo oo dhammaan qodobada macquulka ah la tixgeliyo, waxaa suurtogal ah in lagu gaaro khasaaro yar inta lagu jiro keydinta dalagyada.